Rivo-doza tropikaly Elsa mandalo any akaikin'i Florida Keys misy fiantraikany kely
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Rivo-doza tropikaly Elsa mandalo any akaikin'i Florida Keys misy fiantraikany kely
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny Florida Keys Overseas Highway dia misokatra sy miasa tanteraka, toy ny seranam-piaramanidina Key West International sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Florida Keys Marathon.
Ny tompon'andraikitra sy ny mpiasan'ny fotodrafitrasa Florida Keys dia tsy nanisy afa-tsy fiantraikany kely teo amin'ny faritry ny nosy.
Ny lakilen'ny lakile dia nitatitra fa tsy nisy fahatapahan-jiro sy fifandraisana tsy mandeha.
Miverina ao amin'ny Keys Alarobia ny toetrandro mahazatra toy ny fahavaratra.
Rivo-doza tropikaly Elsa nandalo teo akaikin'ny Key Florida ambany sy Key West Talata 6 Jolay, tsy namela afa-tsy fiatraikany kely.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra National Hurricane Center, nandritra ny fanatonana akaiky azy indrindra tamin'ny faritry ny nosy Keys tamin'ny mitataovovonana talata teo dia teo amin'ny 55 kilaometatra andrefan'ny Key West ny ivon'ilay tafio-drivotra. Tamin'izany fotoana izany Elsa dia tafio-drivotra tropikaly niaraka tamin'ny rivotra 60 mph, na dia ny rivotra matanjaka indrindra aza dia tsapan'i Key West sahabo ho 40-45 mph raha ny filazan'ny mpamantatra mialoha ao amin'ny Office of National Weather Service Florida.
The Florida Keys Misokatra sy miasa tanteraka ny làlambe any ivelany, toy ny seranam-piaramanidina Key West International sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Florida Keys Marathon.
Ny fiasan'ny sidina ara-barotra ao amin'ny Key West International dia tokony hiverina amin'ny fandaharam-potoana mahazatra amin'ny alarobia antoandro, hoy ny talen'ny seranam-piaramanidina Monroe County Richard Strickland. Nanoro hevitra ireo mpandeha izy fa hifandray amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hanamafisana ny ora fiainganana sy ny fahatongavany.
Ny tompon'andraikitra lehibe sy ny mpiasan'ny fotodrafitrasa dia tsy nanao afa-tsy ny fiantraikany kely teo amin'ny faritry ny nosy. Tany Key West, ny mpitondra teniny Alyson Crean dia nilaza fa ny hazo sasany nianjera sy ny tatatra taorinan'ny tafio-drivotra dia nodiovin'ny mpiasa tao an-tanàna. Tondra-drano ny araben'ny tanàna sasany, saingy tamin'ny talata tolakandro dia nihena ny rano.
Hatramin'ny talata alina dia nilaza ny fampitaovana Keys fa tsy nisy fahatapahan-jiro sy fifandraisana tsy mandeha tsara.